सावधान ! छिटो रिसाउने मानिसको मृत्यु पनि छिटो हुने, एक अध्ययन -
रिसाहा मानिसको सरीरमा एड्रेनलाइन हर्मोन तिव्र गतिमा बग्छ । तनाव तथा रिसका समयमा यो हर्मोन पटक पटक रगतमा बग्नाले डिएनएमा असर पर्छ । यसले प्राणघातक रोग तथा मृत्यु समेत हुन सक्छ । धेरै रिस गर्ने मानिसमा निद्रा कम लाग्ने तथा दिमागी असर पनि पुग्न सक्छ । धेरै रिसाहा मानिसमा टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । किनकी रिसले सरीरमा स्ट्रेस हर्मोनका साथसाथै एड्रेनलाइन र टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको उत्सर्जन पनि बढ् अनुसन्धानले देखाएको छ । बढि रिसाहा मानिसमा फोक्सोको समस्या पनि बढि हुने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
Previous बढी सेक्सी भएको भन्दै अभिनेत्रीलाई मन्त्रालयले नै लगायो प्रतिबन्ध, हेर्नुहोस् ५ फोटोहरु (फोटो सहित)
Next यहाँ बन्दैछ विश्वकै ठुलो एयरपोर्ट, वार्षिक १० करोड यात्री, कुन ठाउ होला ? जान्नुहोस (फोटो सहित)